काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरु आइतबारदेखि भाैतिक रूपमा सञ्चालन गर्न पाईने भएको छ । बुधबार बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले आइतबारबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो ।
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य रु. पाँच सयले घटेको छ । बुधबार रु. ९० हजार ९०० मा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज रु. ८९ हजार ६०० तोकिएको छ ।
सयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोभिड १९ का विरुद्धको खोपका विषयमा एक अलग्गै बैठक गर्ने भएको छ । सो बैठकमा विश्वमा आगामी वर्ष सन् २०२२ मा विश्वमा कोभिड खोपको उपलब्धताका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।
नाइजेरियाको एक उत्तरी प्रान्तमा गएको मार्च महिनादेखि सुरु भएको हैजाको प्रकोपका कारण कम्तीमा पनि ३२९ जनाको ज्यान गएको नाइजेरियाका एकजना स्वास्थ्य अधिकारीले आज जानकारी दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार नाइजेरियाको उत्तरी कानो राज्यमा हैजाबाट ती व्यक्तिको ज्यान गएको बताएका हुन् ।
रासस / एएनआई आश्विन ७, २०७८ बिहीबार
पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ३१ हजार ९२३ जना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैसँगै भारतमा कुल सङ्क्रमितको संख्या ३ करोड ३५ लाख ६३ हजार ४२१ जना पुगेका छन् । सरकारी अधिकारीले बिहीबार बिहान दिएको जानकारीनुसार अहिले भारतमा सक्रिय सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाको सङ्ख्या तीन लाख एक हजार ६०४ रहेका छन् । यो सङ्ख्या १८७ दिनपछि कै सबैभन्दा कम हो । भारतमा सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाको...
विष्णु पाण्डेय आश्विन ७, २०७८ बिहीबार
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा दिन सरकारले सूचिकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थाले भुक्तानी पाउन छाडेपछि सेवा बन्द गर्न लागेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको सेवा दिएबापत सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले साढे तीन अर्व बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा वोर्डले जनाएको छ । यता, सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको भुक्तानी नगराउँदा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बापतको...
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक असोज ८ र ९ गते बस्ने, विधान महाधिवेशनमा लागिने प्रस्तावबारे छलफल हुने
प्रमख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक असोज ८ र ९ गते बस्दैछ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न लागेको एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
संवैधानिक नियुक्तिसम्बनधी मुद्दामा संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । बिहीबार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ तोकेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।